भगवान नमान्नेहरूको लागि बुध्दिजीवी सृष्टी (Intelligent Design) - राएलियन आन्दोलन
वर्षेनी हुने हजारौं यू एफ ओ(उडन्तस्तरि) देखाउमा एक व्यक्तिले साँच्चैनै त्यस भित्रको जीव - ती यू एफ ओ हरूलको चालकलाई भेटेको भए? अनि यो व्यक्तिलाई यस अर्को संसारबाट आएको व्यक्तिले पृथ्वीको जीवनको ईतिहास र हुनसक्ने भविष्यकाबारे गोप्य जानकरी दिएको भए? अनि यो सबै जानकारीलाई दसकहरू अघिनै छापियको र बैञानिक र ईतिहासकारहरू लगायत हजारौं मानिसहरूले मानेका भए?
के तपाईं त्यस्तो किताब पढ्न चाहन हुन्नथियो?
यो वेबसाइटले तपाईंलाई आफैंले ताराहरूपारिवाट आएको असाधारण“सन्देश” पढ्ने अवसर दिन्छ।
अहिले डाउनलोड गर्नुहोस्
२७ वर्ष हुँदा, क्लड भोरिहोन( अहिले “राएल” नामले चिनिने) एक रेस-कार ड्राइभर र पत्रकार भएर आफ्नो जीवन तृष्णाले बाँचिरहेका थिए। डिसेम्बर १३, १९७३ मा आफ्नो काममा जाँदा एक यू एफ ओ सँग भेट भएपछि वहाँको जिन्दगी सधैंको लागि बदलियो। यो दिनपछि वहाँले आफ्नो यस अजीब अनुभव संचार माध्यमले लिने अन्तर्वाता र सम्मेलनहरुमा भन्दै संसार घुमेकाछन्।
त्यो दिन राएलले के गरे भनी जान्न राएलबाटै विस्त्रीत विवरणमा यो घटनाबारे सुन्नुहोस्।
आफ्नो अन्तरिक्ष जम्काभेटहरुमा राएलले सन्देशहरूको संग्रह पाए जसले मानिसको जीवनको सबै पक्षहरू छुन्छ। तपाईंको ईक्षा ईतिहास, नौलो विज्ञान, धार्मिक ग्रन्थहरू वा त वैज्ञानिक कथाहरु होस्, तपाईंले यसलाई समय दिई पढ्नु भयो भने एक नयाँ दृष्टिकोण पाउनु हुनेछ।
यो भिडियोले राएललाई दिइएको केहि मुख्य कुराहरूको सारांश दिन्छ।
अहिले कुनै नेपाली अनलाइन कार्यक्रम राखिएको छैन। कृपया अर्को भाषा छान्नुहोस्।
यो देशमा कुनै घटनाहरूको कार्यक्रम गरिएको छैन।